Phila Impilo Yakho Ehamba Phambili e-Balie Bay - I-Airbnb
Phila Impilo Yakho Ehamba Phambili e-Balie Bay
Leli fulethi likanokusho elinekamelo elilodwa e-Camps Bay lisendaweni ekahle kakhulu yokujabulela konke okunikezwa yi-Cape Town. Inovulande omkhulu wangasese obheke uLwandlekazi lwe-Atlantic, lena yindawo ekahle kakhulu yokujabulela ama-sunsets ahlaba umxhwele ne-cocktail ngesandla. Itholakala ebhishi eyinhloko ye-boulevard kwenye yezindawo ezicebile kakhulu nezithandwayo e-Cape Town. Eduze namabhishi, izindawo zokudlela & amathilomu.
Izivakashi zingasebenzisa ngokuyimfihlo yonke indawo ephansi yokuqala yaleli fulethi, namanye amafulethi angu-2 esakhiweni.
Kunendawo eyodwa ebekelwe, ngaphandle komgwaqo yokupaka izivakashi ezingayisebenzisa.
Umnakekeli wendlu uza ngoLwesine.
I-WiFi engaphendulwanga ifakiwe.
4.70 · 119 okushiwo abanye
Beka ngokumelene nengemuva elihlaba umxhwele lezintaba zase-Twreon, ibhishi lase-Camps Bay lingelinye lamabhishi amakhulu kunawo wonke futhi amahle kakhulu e-Cape Town. Yindawo ehamba phambili yokuba e-Cape Town futhi iyindawo engumakhelwane ye-vibey enezindawo zokudlela ezihamba phambili (i-CodFather & The Bungalow ukusho ezimbalwa).
Ebhishi, ungakwazi ukuqasha ama-lounger nezambulela ngosuku lokulala elangeni, uthole ukubhucungwa umzimba, noma udlale i-volleyball. Kuvame ukuba nokuzijabulisa emgwaqweni njengoba ilanga selishonile.
Ulwandle luzolile impela futhi lulungele ukubhukuda ngenxa yesikhundla esivikelekile se-Camps Bay. Eningizimu, uzothola indawo yokubhukuda ehlanzekile. Ingxenye yasenyakatho yinhle kakhulu ukutshuza emagagasini.
Angihlali kuleyo ndlu, kodwa ngiseduze futhi ungathintana nami noma othile ovela eqenjini lami e-Propr noma nini phakathi nokuhlala kwakho. Uma udinga okuthile okulungisiwe, ufuna ukubhukha uhambo, udinga ukudluliselwa esikhumulweni sezindiza noma ungathanda nje amacebiso endawo, unganqikazi ukubuza.
Angihlali kuleyo ndlu, kodwa ngiseduze futhi ungathintana nami noma othile ovela eqenjini lami e-Propr noma nini phakathi nokuhlala kwakho. Uma udinga okuthile okulungisiwe, ufuna…